DwarfCorp: tonga kapitalista bibidia amin'ny tontolon'ny Fantasy | Avy amin'ny Linux
DwarfCorp: tonga kapitalista bibidia amin'ny tontolo nofinofy
Androany aho nihaona tamin'ny lalao mampiala voly sy mahafinaritra ho an'ny linux antsoina DwarfCorp, aiza ianao no lasa ilay Mpitantana orinasa matanjaka, izay mikendry ny hitrandraka sy hitrandraka faritany vaovao. Amin'ny maha mpitantana anao dia tsy maintsy manao ny fomba rehetra hitazomana ny orinasa ianao ary hampitombo ny tombom-barotra, ka tsy maintsy hanao izany ianao mivadika ho kapitalista dia handeha lavitra.
Tsy zava-baovao ity lalao mampiankin-doha ity, ary nifarana tamin'ny 2013 izany noho ny famatsiam-bola tao kickstarter, toerana nahitan'ireo mpanamboatra azy nanangona 45000 XNUMX dolara mahery. Andro vitsy lasa izay dia nanao fanatsarana tsara izy ireo, noho izany izahay dia hahazo ny lalao tetikady mampiala voly sy havaozina izay azonao lalaovina amin'ny fizarana Linux.
1 Inona ny DwarfCorp?
2 Ahoana no hankafizana ny DwarfCorp?
3 Fehiny momba ny DwarfCorp
Inona ny DwarfCorp?
Izy io dia lalao paikady 3D misokatra tanteraka, noforonin'i Lalao marina tanteraka, Izay itarihanao zanatany karana kapitalista tsy masiaka hahita tany vaovao ary hitrandraka azy ireo hiteraka harena.
Amin'ny maha mpitantana ny fikambanana anao dia mila mahazo ny toerana tsara indrindra ianao hanangonana harena, avy eo dia tsy maintsy mandefa vondron'olona mpikaroka dwarf amin'ny balaonina ianao. Avy any, miankina aminao ny hahazoana antoka fa ny dwarveso dia velona maharitra ela mba hitrandrahana volamena sy vato soa.
Los enanos deben cavar profundamente en la tierra para descubrir gemas raras y minerales, y enviarlos de vuelta a la patria en un globo o barco. Tsy maintsy mikarakara ny fiarovana ianao tu colonia de los Elfos y demás mostruos, con muros, trampas y mercenarios, además, es tu tarea promover a tus empleados cuando realizan un buen trabajo, o darles una bofetada si se descuidan.
Adidinao ny mahafehy ny kanto amin'ny asa-tanana amin'ny kerobima. Mahita ody amin'ny alàlan'ny fikarohana majika, mianatra momba ny voan'ny zava-maniry, ary koa mankafy rehefa maniry sy mivoatra ny zanatany.
Dwarfcorp se juega desde una perspectiva de flotación libre. El juego tiene lugar tanto por encima como por debajo de la tierra, lo que lo convierte en un verdadero juego de estrategia 3D en tiempo real. Izy io dia manana lalan-kely, tany efitra, fandoroana hatramin'ny tendrombohitra feno lanezy.
Afaka mahazo fomba fijery tsara kokoa amin'ity lalao mahafinaritra ity isika amin'ny fijerena ireto horonan-tsary ofisialy manaraka ireto:
Ahoana no hankafizana ny DwarfCorp?
Mba hankafizana an'ity lalao mahafinaritra ity dia ampidino fotsiny ny dikan-teny farany mifanaraka amin'ny maritrano: DwarfCorp_FNA_linux32.tar o DwarfCorp_FNA_linux_64.tar.
Manaraka izany dia tsy maintsy esorinay ny fonosana mifandraika amin'izany ary anaovy ilay rakitra ./DwarfCorpFNA.bin.x86 o ./DwarfCorpFNA.bin.x64 araka ny maritrano.
Avy hatrany dia hiditra amin'ny tontolo majika ianao, izay ny kapitalista fetsy sy hendry indrindra ihany no afaka mandresy.
Fehiny momba ny DwarfCorp
DwarfCorp Ity dia lalao mahaliana sy mampiala voly izay mampifangaro tetika somary mampiady hevitra amin'ny sary azo ekena sy lalao filalaovana izay hahagaga ny maro kokoa. Ry mpitia paikady sy orinasa, azo antoka fa hahafinaritra antsika mandritra ny ora maro amin'ity lalao ity izay mahasarika anao rehefa miditra amin'ireo endriny ianao.
Ny fanatanterahana mora azy, ny fangatahana kely takiana, ny drafitra tsara ary ny sary malina dia mahatonga azy io ho iray amin'ireo lalao ho an'ny linux Nahafinaritra ahy indrindra tamin'ny taona lasa. Manasa anao aho hanandrana azy ary hamela ny fahatsapanao momba an'io.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny DwarfCorphttp dia azonao atao ny mitsidika ny azy ireo tranokala ofisialy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Games » DwarfCorp: tonga kapitalista bibidia amin'ny tontolo nofinofy
Carlos Montealegre dia hoy izy:
Salama, androngo. Misaotra betsaka anao nizara ity lalao ity. Manana fanontaniana fotsiny aho, rehefa mihazakazaka azy aho dia mandefa ahy izao hafatra manaraka izao ny terminal ary tiako ho fantatra raha misy fomba hamahana ireo hadisoana miseho eo ireo satria rehefa eo amin'ny sehatry ny lalao aho dia miadana be na dia mamela ny sary ambany araka izay azo atao.
OpenGL Device: Gallium 0.4 amin'ny NV4C
OpenGL Driver: 2.1 Tabilao 12.0.6
Mpivarotra OpenGL: nouveau
Profile MojoShader: glsl120
EXT_swap_control_tear tsy tohanana. Miverena amin'ny VSync mahazatra.
Misaotra betsaka, hitandrina ny valinteninao aho.
Valiny tamin'i Carlos Montealegre
namkhai dia hoy izy:
Azoko atao ny manatanteraka azy amin'ny fampiharana ireto baiko ireto:
Mamaly an'i namkhai
10 Antony hampiasana Linux